रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), असार ८, २०७५
नयाँ किसिमको योजना तर्जुमामा समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । धन प्राप्तिका निम्ति पेसा–व्यवसाय एवं स्थान परिवर्तन हुनसक्छ । आफ्नो सामथ्र्य बिर्सिएर अर्काको देखासिकी गर्न खोज्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सप्ताहन्तमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , असार ८, २०७५
मुस्ताङ, सिन्धुली तथा काठमाडौंमा खिचिएको चलचित्र ‘तिमी हुन्छौ जहाँ–जहाँ’ १ घण्टा ५७ मिनेट लामो छ । वर्षा शिवाकोटी यो चलचित्रमा अतिथि भूमिकामा देखा पर्छिन् । अहिलेसम्म ८० वटा स्क्रिन पाएको यो चलचित्रले अरू हल पाउने सम्भावनासमेत रहेको निर्देशक बस्यालले बताए । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता शिव श्रेष्ठद्वारा निर्मित चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ का कलाकारहरूको सहभागिता रहने यो फेसन शो तथा सांगीतिक कार्यक्रमलाई ट्रि मिडियाले आयोजना गर्न लागेको हो । फेसन शोमा जर्दोजी बुटिकले तयार पारेका पहिरनहरू प्रदर्शन गरिनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
निर्देशक कुस्कु माझी नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँपन ल्याउन यो चलचित्रले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गर्छन् । रिच इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई कमल फुयाँल तथा कमल केआरले निर्माण गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
जेठका चलचित्र : सबै फ्लप !
रामजी ज्ञवाली, असार ८, २०७५
हरिका कलाकार विपिन कार्कीको अभिनयको चौतर्फी प्रशंसा भए पनि चलचित्र व्यवसायिक रूपमा असफल भयो । सफल केसी तथा प्रतीक गुरुङको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र हरि पूर्वनिर्धारित मितिबाट सरेर जेठ १८ मा प्रदर्शनमा आएको थियो । चलचित्र समीक्षक, पत्रकार तथा केही बुद्धिजीवीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि हरि असफल सावित हुन पुग्यो । पुरा पढ्नुहोस्
सफा माछामासुको सेवनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । आफ्नो शरीरलाई कस्तो खालको मासु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेर यसको उपयोग गर्नुपर्छ । हरेक दिन बिहान, दिउँसो र साँझ अण्डा छुट्दैन । खानामा सकेसम्म २ पिस मासु खान्छु । एकपटकमा २ देखि ३ वटासम्म अण्डा खानेगरेको छु । पुरा पढ्नुहोस्
एकराज सुवेदी, असार ८, २०७५
विश्वकप प्रारम्भ भएको छ । सबैका आँखा खेलाडीतर्फ मोडिएका छन् तर ग्ल्यामरको दुनियामा रमाउनेहरूका लागि पर्दा पछिल्तिर अर्को आकर्षण पनि छ । रसियामा हुने विश्वकपलाई अझै आकर्षक बनाउन ती खेलाडीका श्रीमती तथा गर्ल फ्रेन्डले पनि फरक भूमिका खेल्नेछन् । धेरैले फुटबलतिर ध्यान दिने समयमा कतिपयको ध्यान भने ती श्रीमती वा गर्लफ्रेन्डतिर जान सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, असार ८, २०७५
मानव जीवन सुरु हुन तयार भएका यी तन्तुलाई कुनै पनि हालतमा फोहर वा दूषित भन्न मिल्ने ठाउँ छैन, तर यो पक्कै हो कि यसलाई समयमै सफा गरिएन भने त्यसमा रोग उत्पन्न गर्ने जीवाणुको वृद्धि हुनसक्छ । महिनावारीका बेला स्वस्थ पुरुष तथा महिलाबीच हुने यौन सम्पर्कलाई वर्जित गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । महिनावारीको रगतको स्रोत पाठेघर हो र पाठेघरको मुखमा भएको सानो प्वालबाट रगत बाहिर आउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १ करोड त फुटबल विश्लेषक रै’छन्, त्यत्तिकै संख्यामा टिप्पणीकर्ता होलान्, विडम्बना विश्वकप खेल्ने ल्याकतका भने ११ जना पनि छैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
एक भिडियो सन्देश छोड्दै खानले ‘डिआईडी’ सिजन–४ मा टप टेन सम्म पुगेका सुनिल आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगी रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सुनिल नेपालको ठूलो सुपरस्टार बन्न जाँदैछ । मेरो तर्फबाट उसलाई धेरै धेरै शुभकामना । तिमी एकदम राम्रो पर्फमर, डान्सर र आर्टिस्ट हौ ।’ पुरा पढ्नुहोस्